Su'aalaha La Weydiiyo | Diiwaangelinta Furan | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Muxuu damaanad qaadayaa codsigayga Diiwaangelinta Furan?
Ma u baahanahay inaan ku ogeysiiyo walaalaha ka yar yar?
Waxaan codsaday / diiwaangaliyay. Goorma ayuu xiriirinteyda xigta noqon doontaa?
Marka la ii oggolaado Diiwaangelinta Furan miyaan u baahanahay inaan dib u codsado sannad kasta?
Goorma ayaan awoodi doonaa inaan galo Skyward?
Waxaan dhibaato ku qabaa inaan galo Skyward ama aan ilaawo eraygayga sirta ah.
Ma ka bedeli karaa cinwaankayga Skyward?
Goorma ayaan iska diiwaangelinayaa gaadiidka / baska halkee ayaan ka heli karaa macluumaadkaas?
Goorma / Sideen isku diiwaan geliyaa fasallada MHS?
Reerkaygu waa guuray! Yaan la xiriirayaa?
Haddii aan ka guuro degmada weli miyaan xaadiri karaa?
Markaad dhammaystirto arjiga isqorista furan, waxaad codsaneysaa Degmadda, ma codsanayso dugsi gaar ah ama barnaamij. Waxaad fursad u heli doontaa inaad ku darto saddexda xulasho ee ugu sarreysa foomka - xanaanada caruurta, fadlan ku dar dhismahaaga 3-da ah ee ugu sarreeya iyo xulashooyinka luqadda. Kuwaani waa la tixgelin doonaa waxaana lagu ogeysiin doonaa dhismaha / barnaamijka jira ee emayl ahaan.
Haa, fadlan hubso inaad gasho oo aad hubiso Skyward Family Access si aad u hubiso in dhammaan ardaydaadu ay ku jiraan keydkeena. Haddii aadan haysan xisaab, fadlan si xor ah ula xiriir xafiiska diiwaangelinta ardayda lambarka 952-401-5000 wayna ku caawin karaan.
Waxaad bilaabi doontaa inaad ka hesho isgaarsiinta Degmada Nofeembar.
Qoysaska ka diiwaangashan furan ayaa la ogaysiin doonaa ugu dambayn Febraayo 15 barnaamijka iyo iskuulka la siin doono.
Xannaanada carruurta soo galaya, waxaa lagugu martiqaadi doonaa dhacdada Guga ee dugsiga. Email ayaa bixi doona fasaxa gu'ga kadib (eeg kalandarka degmada )
Maya. Ilmahaaga waa la qori doonaa sanad ilaa sannad illaa qalin-jabinta illaa aad ka baxdo degmada mooyee. Kadib hawshu way bilaabmi doontaa.
Markay tahay Bartamaha-Ogosto Xarunta Teknolojiyada ayaa emayl u soo diri doonta qoyskaaga waxayna awood kuu siin doontaa inaad sheegato koontadaada Skyward
Fadlan la xiriir qoyska.helpdesk@minnetonkaschools.org ama wac (952) 401-5123 si aad u hesho caawimaad farsamo ama dib ugu dajiso lambarkaaga sirta ah.
Maya, fadlan u sheeg kaaliyaha xafiiska dugsigaaga.
Macluumaadka ku saabsan gaadiidka, fadlan booqo degelkooda .
La xiriir xafiiska hagitaanka lambarka 952-401-5811 si aad ballan ugu qabsato lataliye.
Magacyada dambe ee ardayga AL, fadlan kala xiriir Monika Salden lambarka 952-401-5009. Magaca ugu dambeeya ee ardayda MZ, fadlan kala xiriir Lori Schwartz lambarka 952-401-5012. Waxa kale oo aad la xiriiri kartaa kaaliyaha xafiiska dugsiga ardaygaaga.
Markaad soo waceyso, hubi inaad la wadaagto taariikhda saxda ah ee aad ku noolaan doonto goobtaada cusub.
Haa, laakiin gaadiidka ayaa adiga mas'uul kaa noqon doona. Fadlan la xiriir ardayga xisaabaadka si aad ugu sheegtid taariikhda saxda ah ee guuritaanka ka dibna waxaad heli doontaa emayl wata waraaqo dheeraad ah oo dheeraad ah oo loo baahdo in la dhammaystiro.
Fariinta kormeeraha guud
Akhri fariin ka socota Kormeeraha guud Peterson oo ku socota qoysaska degmada ku saabsan Diiwaangelinta Furan.